Hakkari နှင်းလျှောစီးစင်တာရာသီသစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေသည်, Makka Butan နှင်းလျှောစီးစင်တာရှိ 2.500 အမြင့်ရှိ Hakkari Idris Akniyik ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ဒုတိယမြို့တော်ဝန်သည်နှင်းလျှောစီးဓာတ်လှေကားများဆောက်လုပ်ခြင်းကိုပြီးစီး။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Halıcıအီလက်ထရောနစ်သည်ထုတ်ကုန်ရောင်းအားနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလိုအလျောက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသော ABB ၏အဓိကကုန်သည်အဖြစ်အလှည့်ကျစီမံကိန်းများကိုဆောင်ရွက်သည်။ Halıcıသည်အလိုအလျောက်ပြုခြင်းနယ်ပယ်ရှိအစိတ်အပိုင်းအားလုံးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောကုမ္ပဏီအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
ဆရာများထံမှ ospel ၀ ံဂေလိလျှော့စျေး Orbel သို့၊ Ordu Metropolitan မြူနီစီပယ်လက်အောက်ခံ ORBEL A.Ş. 24 ကနိုဝင်ဘာဆရာများနေ့တွင် Cable Car Facility၊ Reverse House နှင့် Adventure Park တို့တွင် 50% လျှော့စျေးရှိလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ 24 နိုဝင်ဘာရာခိုင်နှုန်း 50 [ပို ... ]
Kayseri မြို့တော်စည်ပင်သာယာ၏လက်အောက်ခံ Erciyes A.Ş. နှင့် Dostu Tourist Friendly Taxi başlaသင်တန်းအစီအစဉ်သည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးဌာနညွှန်ကြားမှုနှင့် Kayseri Metropolitan Municipality ၏လက်အောက်ခံဖြစ်သောယာဉ်မောင်းများအကြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရစတင်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Kirrehehir ရှိYaşarBahçeciကာလအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့သည့်“ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Master Plan yapılan” ၏မူဘောင်အတွင်းတွင် 30 ဒေါ်လာသန်းအချက်ပြစနစ်သည်မြို့တော်ကိုမီးအလင်းရောင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ လူ ဦး ရေတစ်သောင်းရှိသောKşrehehirတွင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့သည့် 150 Master Transportation Master Ulan [ပို ... ]
Ankara မြို့တော်ဝန် Mansur Yavaşက EGO သို့ 300 ဘတ်စ်ကားအသစ်များ ၀ ယ်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ရထားလမ်းဖောက်လုပ်မှုကြောင့်ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် BRT စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ခက်ခဲကြောင်းYavaşကပြောကြားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
TÜVASAŞမှအားပေးမှုနှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်အထောက်အပံ့၊ အဆိုပါစက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန, တူရကီ Wagon စက်မှုဝန်ကြီးအဖြစ် (TÜVASAŞ) R & D "R & D Center ကလက်မှတ်" ပေါ်တွင်ပေးပြီခဲ့မက်လုံးပေးခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ 5746 သုတေသန [ပို ... ]
ငါတို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှာအတွက် rosewood ဖြစ်လာသည်သောဤမှို၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပေါ်ပေါက်ရေးပုံပြင်သတိမထားမိကြဘူး 1800 ၏အစ္စတန်ဘူလ်သို့အချိန်ယူပြီး Dingo ၏စပါးကျီ၏ဖော်ပြချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားသို့မည်သို့ရောက်ရှိသွားကြောင်းလေ့လာကြပါစို့။ ပြက္ခဒိန်များ3[ပို ... ]
ကျွန်း Express ကိုလေ့လာရေးခရီးအရေအတွက်တိုးလာ; မကြာသေးမီရက်များအတွင်း Island Express လေ့လာရေးခရီးအများဆုံးတိုင်ကြားချက်များရရှိခဲ့သည့်ပြissuesနာတစ်ခုမှာ4လေ့လာရေးခရီးစဉ်ကိုထပ်ခါတလဲလဲလက်ခံသည်ဟု5လေ့လာရေးခရီးကဆိုသည်။ ကျွန်း [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်သည်တရုတ်၊ တောင်ကိုရီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များနှင့်သဘောတူစာချုပ်များလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောဗိသုကာအပြင်ခိုင်ခံ့သောအခြေခံအဆောက်အအုံ၊ သာလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းပညာနှင့်အဆင့်မြင့်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံများအပြင် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်သို့ပျံသန်းချိန်တိုးချဲ့ ... တူရကီလေကြောင်းလိုင်း၏ကုန်ကျစရိတ်များတိုးမြှင့်; စမ်းသပ်အဆင့်တွင်ပြင်သစ်လေကြောင်းအသွားအလာသည့်စနစ် "ပွိုင့်ပေါင်းမည်" တူရကီထံရောင်းချခဲ့သည်။ လေယာဉ်ပျံသန်းချိန်ကိုတိုစေလိမ့်မည်3တစ်ထောင်သည်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်သို့တစ်နေ့လျှင်လေကြောင်းခရီးကိုတစ်ထောင်ပစ်မှတ်ထားသည် [ပို ... ]
TCDD တင်ဒါအတွက်အကြီးအကျယ်အရှုပ်တော်ပုံ! 1,5 သည်ခင်ပွန်း၏ကုမ္ပဏီအားပေါင်သန်းချီသော 32 တင်ဒါကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ Babacan သည်ဇနီးနှင့်ဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာအပါအ ၀ င် National Railway Signaling Project တွင်အဆောက်အအုံကြီးကြပ်သူအဖြစ်တာ ၀ န်ပေးခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Alanya ဆရာများသည် Cable Car အားအခမဲ့ဖြစ်ရန်ဆန္ဒရှိသည်
Antalya မြို့တော်စည်ပင်သာယာမှမြို့တော်ဝန် Muhittin Böcekက Antalya ရှိဆရာများအား Alanya ရှိဆရာများအားအခမဲ့ပြုလုပ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ မြို့တော် [ပို ... ]